Maxaa laga filan karaa Barlamanka 11-aad ee dalka? | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxaa laga filan karaa Barlamanka 11-aad ee dalka?
News Ayaanle Abdirahman
Inkasta, oo aysan doorasho xalaal ah ku soo bixin, haddana aragtiyo kala duwan, ayaa laga bixinayaa, nooca hoggaan ee ay barlamanka 11-aad, u xuli doonaan dalka, waa warbixinta Wariye Ayaanle Cabdiraxmaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Doorashada dadban ee Soomaaliya, waxey dhashay, barlamaan ku soo baxay hab aan daah furneyn, kuwaas oo golaha sharci dajinta dalka matali doono 4-ta sano ee inagu soo wajahan.
Falanqeeyayaasha siyaasaddu, waxa ay sheegayaan, in ay adag tahay in barlamanka uu xusho, hoggaan u diirnaxaya dalka iyo dadka.
Sababta ugu weyn ayaa ah, in xubnaha barlamanka badankood, ay wataan shaqsiyaad, ay ugu horreeyaan kooxda fadhisa Villa Soomaaliya, halka kuwa kalana ay ku daaban yihiin maamul gobolleedyada qaarkood.
Arimahaas, waa kuwa shakiga badan galinaya, in la helo madax dalka samata bixin karta, maaddaama Baarlamankii dalkan uu u iibsan yahay dad dano gaar ah leh.
Xubnaha Baarlamaanka 11-aad, ma heystaan kalsoonida shacabka, sababo la xiriira in aysan ku imaan rabitaankooda, taasina waxey horseedi kartaa hoggaan fadhiid ah, oo dalka cuuryaamiya muddo kale oo hor leh.
Quburo kale ayaase ku doodaya, in Baarlamaanku, uu kasban karo bulshada, waa haddii uu u fekiro, si miisaan leh oo ay ku dheehan tahay dal jaceel iyo Soomaalinimo.
Caqabadda ugu weyn ayaa ah, in dowlado shisheeye ay saameyn ku leeyihiin, codka baarlamanaka, waana arrin nasiib darro ah, oo soo shaac baxday dhowrkii sano ee ugu danbeysay.
Waxaa sidoo kale, maalmaha loo diyaar garoobayo doorashada xilalka sare, la arkaa, xildhibaanno dhaqaale ku doonaya, matalaadda bulshada, oo gor-gortan kula jira dadka u hanqal taagaya kuraasta dalka ugu sareysa.
Sida la tilmaamayo xubnaha baarlamaanka cusub, waxaa u badan dhallinyaro, iyadoo tiro koob bulsho oo dhawaan la sameeyeyna uu sheegayo, in dadka dalka %75, boqolkiiba (todobaatan iyo shan) ay yihiin dhallinyaro, taasi ayaa ka dhigan, in masuuliyad culus ay saaran tahay xubnaha baarlamaanka 11-aad, kuwaas oo marka laga soo tago beelaha ay kuraasta ka heleen, sidoo kale matala dhallinyarada, oo ah kuwa ay daruufo kala duwan hareeyeen.
Talooyinka lagu biirinayo
Talooyinka loo jeedinayo, waxaa ka mid ah, in aysan soo celin mid la jaal ah, doorashadii ay ku soo baxeen, ee boobka ahayd, waxaana waajib ku ah in ay iska indho tiraan, cid kasta oo garab ku siisay, nidaamkii qaldanaa ee lagu doortay.
Si kastaba, qofka ay xushaan, ayaa ah tan go'aamin doonta, nooca baarlamaan ee uu dalku hantay, waxaana hiil ka sugaya kumannaan Soomaali ah, oo la il daran, xasillooni darro, abaaro iyo dhibaatooyin kale, waxaase la og yahay haddii ay ka beyraan marinka cadliga, in arrintooda ay la micno tahay, maah maahdii ahayd 'Hal booli ah nirig xalaala ma dhasho' maaddaama ay codkoodii ugu abaal gudeen, dadkii kuraasta u xoogay.
W/Q Ayaanle Abdirahman